Imisebenzi ephezulu ye-13 engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhle 2022
Imisebenzi ephezulu eli-13 engeyiyo eyoMzimba ehlawula kakuhle
Imisebenzi ebonakalayo iza noxinzelelo oluninzi kwaye ukuba awufuni ukuba ungatshintshela kuyo nayiphi na imisebenzi engeyiyo eyenyama ehlawula kakuhle kwaye isebenze ngokufanelekileyo naphi na apho ukhoyo.
Ihlabathi lihambile kwishishini ledijithali kunye nesintu kunye neenkampani ezingakwaziyo ukulandela imeko ziya kugwetywa. Indawo yedijithali inkulu kwaye igcwele ngamathuba angenasiphelo ambalwa kuwo athe aphononongwa kwaye aphunyezwa. Ukuba ucinga ukuba amathuba e-intanethi aphononongwe ngokupheleleyo, kuya kufuneka uphinde ucinge kuba akukho ncam iphononongiweyo ngokupheleleyo.
Amashishini amaninzi akwazile ukufikelela ngokupheleleyo kubuchule bawo ngokuza kwe-intanethi kwaye kwavela izimvo ezintsha ngayo eziye zanegalelo kwaye zatshintsha umhlaba. Kule mihla, ezinye iinkampani zemveli ziyavala iindawo zabo ezibonakalayo kwaye zihamba ngokupheleleyo kwidijithali, ke yonke imisebenzi yabo kubandakanya nabasebenzi bonke baya "okungengokwasemzimbeni" kwaye basebenze ekhaya okanye basebenze kwi-Intanethi.
Imisebenzi efuna ubukho bomzimba inoxinzelelo ngokwenyani xa kuthelekiswa nemisebenzi engayiyo, kuya kufuneka uhambe ngobunzima bokuya nokubuya emsebenzini, ugcine ukubonakala komphathi wakho kunye nabo usebenza nabo, kwaye ayiguquki. Imisebenzi engeyiyo eyomzimba ibhetyebhetye kakhulu, awuzukuhamba uxinzelelo lokuya kwindawo yokusebenza ebonakalayo yonke imihla, kwaye uza kusebenza ukonwaba kwikhaya lakho okanye nakweyiphi na enye indawo.
Ukusebenza ekhaya okanye ukwenza imisebenzi engeyiyo eyasemzimbeni kunokutsalela kuwe ngezizathu ezininzi. Oku kukunika inkululeko engakumbi kwinkqubo yakho yemihla ngemihla, ithuba lokusebenzela iinkampani ezikwelinye ilizwe okanye ilizwe okanye ukulandela ezinye izinto ngelixa usamkela umvuzo ozinzileyo. Njengearhente yeinshurensi okanye ikhowudi yonyango, umzekelo, eminye imisebenzi engeyiyo eyomzimba ifuna izakhono zobugcisa ezithile okanye izidanga.
Ukongeza kwizakhono zobugcisa, eminye imisebenzi engeyiyo eyomzimba okanye yokusebenzela ekhaya ifuna izakhono zobugcisa, ezinjengokubhala okanye uyilo. Xa ukhangela umsebenzi omtsha okude, uneendlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Njengomntu osebenzela ekhaya, uyavuka nanini na xa ukhetha hayi kuba iwotshi ye-alamu icimile, kodwa kuba ulungele ukuqala usuku lwakho.
Ungavuka ebhedini wenze ikomityi yekofu, uthathe ixesha lakho ufunda iphephandaba, imagazini, okanye inoveli ngaphambi kokuhlala phantsi kwikhompyuter yakho ukuze usebenze iiyure ezimbalwa, kwaye ufumane imali eninzi- yonke loo nto usahleli kwiipijama zakho. Ukuba oku kubhenela kuwe qhubeka ufunda iposti yebhlog.
Kule nqaku, sixoxe ngemisebenzi engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhle-banokuthathwa njengemisebenzi ekwi-Intanethi ehlawula kakuhle-ukuba sele usebenza kwaye ufuna ukutshintsha uye kwikhondo elifanelekileyo lomsebenzi ke kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuya Umsebenzi ongekho ngokomzimba okanye kwi-intanethi. Kukwanjalo nakubantu abasaza kungena emsebenzini, unokufuna ukuqaphela ukuya kwinkqubo yesidanga enokukufumanela umsebenzi okwi-Intanethi.
1 Yintoni umsebenzi ongeyomzimba?
2 Uyifumana njani imisebenzi engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhle?
3 Imisebenzi engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhle
3.1 1. Umenzi mizobo
3.2 2. Umphuhlisi weWebhu
3.3 3. Umcwangcisi
3.4 4. Ikhowudi yonyango
3.5 5. Ummeli weinshurensi
3.6 6. Umsunguli we-Intanethi
3.7 7. Umhleli oZimeleyo
3.8 8. IBhloga
3.9 9. Umbhali weSibonelelo
3.10 10. Umcebisi weNtengiso oZimeleyo
3.11 11. Umncedisi oSebenzayo
3.12 12. Ababhali bezobuGcisa
3.13 13. Ukukhutshelwa
Yintoni umsebenzi ongeyomzimba?
Umsebenzi ongengowasemzimbeni ngumsebenzi ongekhe ubekho ngokwasemzimbeni, uya kuba ngumqeshwa osisigxina osebenza ekhaya, ubukhulu becala kwi-Intanethi.
Uyifumana njani imisebenzi engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhle?
Ukufumana imisebenzi engeyiyo eyokwenyama ehlawula kakuhle okanye imisebenzi ekwi-Intanethi ehlawula kakuhle kuyakufuneka ufikelele kumashishini endawo, ubabonise ubuchule bakho, kwaye ungabanika malini ukuba usebenza ekhaya. Unako kwakhona ukuya kumaqonga ezinto ezizimeleyo ezinje ngeFiverr kunye neUpwork ukukhangela abathengi kwaye bahlawula kakuhle.
Imisebenzi engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhle
Uluhlu oludwelisiweyo kwaye kuxoxwe ngalo apha yimisebenzi engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhle onokuthi uyithathele ingqalelo ukuqala umsebenzi kwi-career.
1. UMyili wemizobo
Ukuba ngumyili wemizobo yenye yemisebenzi engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhle, unokuthatha isigqibo sokuhamba ngokuzimela kwaye unikezele ngeenkonzo zakho kwiinkampani ezahlukeneyo, imibutho, kunye nabaxhasi ngokubanzi okanye unokusebenza kunye nenkampani ethile okanye umxhasi. Ukuhamba ngokukhululekileyo nokusebenza nabantu abohlukeneyo kuya kukunika umvuzo ngakumbi, ukubhengeza okungcono, kunye nokwakha amava akho ngokusebenza nokujongana nabantu abahlukeneyo.
Nokuba uhamba ngokuzimela okanye akunjalo, nokuba ukhetha yiphi na, ungasebenza ngokuthe ngqo kwikhaya lakho okanye kuyo nayiphi na indawo ekulungeleyo. Nangona kunjalo, kufuneka kubekho unxibelelwano olusebenzayo phakathi kwakho nomthengi wakho ukuze ukwazi ukwenza ngokucacileyo oko bakufunayo.
Izinto ezibonakalayo zenziwe ngabaqulunqi begraphic, zombini kwiifomathi zokuprinta kunye nezidijithali. Bakwasebenza kwiiprojekthi zentengiso ezinjengeeleta zeendaba kunye neeprojekthi zemidiya yedijithali enjengefilimu, iwebhusayithi okanye uyilo lweapp, ukupakishwa kwemveliso, okanye uyilo loyilo. Ifemi, umxhasi, okanye umlawuli wezobugcisa uya kunika umyili wemizobo ngengxelo okanye umbono abanqwenela ukumela ngokubonakalayo. Emva koko, umyili uyadibanisa isicatshulwa, imizobo kunye nombala ukwenza into ebonakalayo.
Umvuzo ophakathi: $ 18.26 ngeyure
2. Umakhi weWebhu
Lo ngomnye wemisebenzi ephezulu yokukhula kwindawo yedijithali kwaye yenye yemisebenzi engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhle. Amashishini emveli afudukela kwindawo yedijithali ahlala enza iwebhusayithi kwaye amashishini amatsha afuna iwebhusayithi ukubonelela ngeenkonzo zawo njalo njalo. Ngaphandle kwamashishini enza iiwebhusayithi ngeenkonzo zawo, abantu ngabanye baneewebhusayithi zabo ukuqhubela phambili ukuzithengisa kunye neempawu zabo.
Ukwenza oku, bafuna ubuchule bomphuhlisi wewebhusayithi oza kuthi ayile inkqubo ukuze ilungele incasa kunye nesimbo somthengi kunye nokufezekisa injongo yeenkonzo abafuna ukuzenza.
Umvuzo ophakathi: $ 71,626 ngonyaka
Inkqubo yenye yezakhono ezikhulelweyo ngokuqalwa kwe-intanethi kwaye kubandakanya ukubhala ikhowudi egunyazisa usetyenziso lwesoftware. Usebenzisa iilwimi ezahlukeneyo zekhompyuter, umdwelisi wekhompyuter unokwakha, avavanye kwaye alungise iinkqubo. Njengenkqubo, unokwazi ukugxila kwiintlobo ezahlukeneyo zezicelo eziwela phantsi kweenkqubo zophuhliso okanye isoftware njengenkonzo.
Uya kuba noxanduva lwemisebenzi enje ngokuguqula inkqubo yoyilo lube yikhowudi, ube yinkosi yeelwimi zekhompyuter, kunye novavanyo kunye neenkqubo zokujongana neengxaki. Unokuthatha isigqibo sokusebenza ngokuzimeleyo okanye uqhotyoshelwe kumxumi omnye okanye inkampani, nokuba yeyiphi na oyikhethileyo onokuyenza, ungasebenza ngokupheleleyo ekhaya kuba ingumsebenzi ongekho ngokomzimba
Umvuzo ophakathi: $ 67,099 ngonyaka
4. Ikhowudi yonyango
Lo ngomnye wemisebenzi engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhle kwaye imisebenzi yekhowudi yonyango ibandakanya ukwenza ikhowudi kunye nokukhupha iirekhodi zonyango. Ngokwenyani ayingomsebenzi onzima kwaye enyanisweni yiminye yemisebenzi emnandi ehlawula kakuhle kwaye yenye yemisebenzi yoxinzelelo oluphantsi ehlawula kakuhle.
Ukuqala ikhondo lomsebenzi kule ndawo, uyakufuna isidanga, idiploma, okanye isatifikethi sokukuxhobisa ngokufanelekileyo ngezakhono ezaneleyo zokwenza umsebenzi ngokufanelekileyo. Awudingi ukuya kuxinzelelo lokufumana isidanga se-bachelor kule ndawo, isidanga sokudibana sanele ngokwaneleyo ukuba usebenze kwindawo yokhathalelo lwempilo okanye kwinkampani yeinshurensi.
Iikhowudi zonyango azikwazi ukwenza izinto ezizimeleyo ngokungafaniyo nezinye ezikolu luhlu, kufuneka ziqhotyoshelwe kwinkampani ethile kwaye oku kungenxa yokuba zijongana nedatha ebuthathaka echaphazela impilo.
Umvuzo ophakathi: $49,204
5. Ummeli weinshurensi
Lo ngomnye wemisebenzi engeyiyo eyasemzimbeni ehlawula kakuhle kwaye ukuba udiniwe bubunzima obuzayo obuza nesimbo sokusebenza ngokwesiko, unokufuna ukuqaphela ukutshintshela ekubeni ngummeli weinshurensi. Umsebenzi wearhente yeinshurensi okanye umrhwebi kukubonelela abathengi ngeendlela ezahlukeneyo zeinshurensi kwaye ubancede ekukhetheni imigaqo-nkqubo ehambelana neemfuno zabo kunye neemeko.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeearhente zeinshurensi, kukho iiarhente ezijolise ekunikezeleni ngeinshurensi yezempilo kwaye kukho ezinye ezizodwa ekugubungeleni ukonakaliswa kwepropathi. Uya kuphuhlisa ubudlelwane obulungileyo bokusebenza kunye nabaxumi, uye kubo ngokufowuna okubandayo kwaye uthumele i-imeyile ngqo ukubuza malunga neemeko zabo zeinshurensi kunye neemfuno zexesha elizayo, kwaye uhambise iimfuno zomgaqo-nkqubo.
Umvuzo ophakathi: $ 55,651 ngonyaka
6. UTutor okwi-Intanethi
Umhlohli we-Intanethi uyinto yokwenyani, ngaphandle kootitshala bakho kunye noonjingalwazi abasebenzisa amaqonga okufunda kwi-Intanethi ukufundisa abafundi, kukho amaqonga akhelwe ukufundisa abafundi kwi-intanethi kuluhlu olubanzi lwezifundo zemfundo ukusuka kumabanga aphantsi ukuya kumaziko emfundo ephakamileyo. Elinye lala maqonga li cambly.com, iwebhusayithi ebonelela ngeenkonzo zokufunda kubafundi bezikolo eziziiprayimari neziziisekondari ezivela kwihlabathi liphela kwimfundiso yesiNgesi.
Kukho ezinye iiwebhusayithi ezinje, ezinye zigxile kwisifundo esithile kwaye ezinye zifundisa uluhlu olubanzi lwezifundo. Kukho abafundisi abakwi-Intanethi kwezi webhusayithi zifumaneka nge-24/7 ukukufundisa, ukukunceda ufunde, uphonononge izifundo zovavanyo kunye nezifundo, kwaye uchaze ngakumbi iinkalo zezifundo apho abafundi banengxaki nazo.
Ukuze ube ngumhlohli we-Intanethi, kuya kufuneka ulunge kwisifundo ofuna ukusifundisa. Unokuphumelela, isidanga sokuqala, okanye umntu nje onesakhono okanye onamava kwisifundo esithile. Uya kudinga ikhompyuter kunye noqhagamshelo oluzinzileyo lwe-intanethi.
Umvuzo ophakathi: $ 24.30 ngeyure
7. Umhleli oZimeleyo
Lo ngomnye wemisebenzi engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhle, ukuba uneliso lokubona iimpazamo kumanqaku kwaye urhawuzelela rhoqo ukuhlela nje ngelixa ufunda kuya kufuneka uthathele ingqalelo ikhondo lomsebenzi kulo msebenzi. Ngaphandle kokuba ungomnye wemisebenzi engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhle, ikwayenye yemisebenzi emnandi ehlawulayo kwaye unokusebenza ekhaya kwaye ufumane itsheki rhoqo ngenyanga.
Njengomhleli ozimeleyo, awuyi kubotshelelwa kumthengi omnye okanye kwinkampani, uya kuthi usasaze amaphiko akho, udibane nabantu abahlukeneyo, uphonononge izimvo ezahlukeneyo, wakhe ubungcali bakho, ufumane ukubonwa ngakumbi, amava abanzi, kwaye wenze okungakumbi imali.
Umvuzo ophakathi: $ 22.83 ngeyure
Ukubhloga yenye yemisebenzi engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhle kwaye enye yezinto zalo msebenzi kukuba awunamphathi okanye umxhasi nangayiphi na indlela. Yonke imisebenzi engeyiyo eyomzimba edweliswe apha iyatshintsha, oko kukuthi, uya kuthatha isigqibo ngeeyure zakho zokusebenza kunye nokuba usebenza kangakanani ngosuku okanye kwiiyure kodwa usafuna ukuphendula umntu kodwa ukubhloga akunayo loo nto, kuyenzeka ngokwenene .
Ukuze ube yiblogger ayifuni sidanga kodwa kuyakufuneka uye kuqeqesho oluthile ngendlela yokusebenzisa izixhobo ezifanelekileyo ngendlela eyiyo. Nangona kunjalo, ukuba ungacwangcisa, wenze uphando, ubhale, kwaye uhlele amanqaku ukuze usombulule ingxaki emva koko kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba uyibhlogger.
Umvuzo ophakathi: $ 18.83 ngeyure
9. Umbhali weSibonelelo
Ababhali besibonelelo bahlakulela kwaye bakhe ubudlelwane kunye nabaxhasi ngomsebenzi wabo. Ukongeza, bayila kwaye bagcina ishedyuli yamaxesha abekiweyo kunye nezindululo zoyilo, izibheno zabaxhasi, kunye neeleta zokuvuma.
Ukubhala ngezibonelelo ngomnye wemisebenzi engeyiyo eyokwenyama ehlawula kakuhle ikuvumela ubungakanani bokubanakho ukuba bhetyebhetye kwaye usebenze naphina apho ikulungeleyo ekunokuba likhaya lakho.
Umvuzo ophakathi: $ 46,577 ngonyaka
10. Umcebisi weNtengiso oZimeleyo
Ukubonisana nokuthengisa ngokukhululekileyo yenye yemisebenzi engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhle kwaye ikwangumsebenzi owonwabisayo onika itsheki enamafutha ngenyanga kunye nesixa esiphantsi soxinzelelo. Ngoncedo lwabaphathi kunye nabaphathi abakwinqanaba eliphezulu, abacebisi bezentengiso ezizimeleyo baphuhlisa isicwangciso sokubeka ngobuchule.
Ikwangumsebenzi wabo ukwenza isicwangciso sentengiso esibhaliweyo sokujongana namanyathelo asisiseko kunye nokucebisa ngeendlela zokubeka imveliso kumnikelo ngamnye omtsha.
Umvuzo ophakathi: $ 32.89 ngeyure
11. Umncedisi oSebenzayo
Ngeenkampani kunye namanye amashishini ahlukeneyo ahamba ngokwedijithali ngokupheleleyo, kukho imfuno ephezulu yabancedisi ababonakalayo. Abancedisi bokwenyani njengoko igama lisitsho ukuba kwelinye icala lekhompyuter okanye i-smartphone kwenye indawo yelizwe ithatha umnxeba womphathi okanye i-CEO yenkampani, ukubamisela iintlanganiso, nokubanceda ngokubanzi emsebenzini wabo.
Ukuba uyakwazi ukuyiphatha, unokuba ngumncedisi ongaphaya komntu omnye kwaye wakhe ubungcali kunye namava kwaye ufumane imali eninzi. Ngokwenyani wenza umsebenzi womncedisi oqhelekileyo okanye unobhala kuphela kule meko ujongekile.
Umvuzo ophakathi: $ 500- $ 2,000 ngenyanga
12. Ababhali bezobuGcisa
Lo ngomnye wemisebenzi engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhle kwaye ekonwabisayo nayo eza noxinzelelo oluphantsi. Iinkqubo zokusebenza kunye neencwadana zibhalwa ngababhali bobuchwephesha abaziphuhlisayo ukusuka emhlabeni ukuya phezulu. Ukucaciswa koyilo lobuchwephesha kunye nezikripthi zovavanyo ziphandiwe, zaphuhliswa, zabhalwa, kwaye amaxwebhu e-elektroniki aveliswa ecaleni kwezikhokelo ezikhutshelweyo.
Umvuzo ophakathi: $ 34,343 ngonyaka
Kuluhlu lwethu lokugqibela lwemisebenzi engeyiyo eyokwenyama ehlawula kakuhle kukukhutshelwa kwaye yinto efunekayo kwi-intanethi efuna ukuba uguqule iifayile zomsindo zibe ngumbhalo. Umsebenzi wakho kukumamela iseti yeethrekhi zomsindo kwaye uchwetheze into oyivayo. Kukho imfuneko yokuchwetheza ngokukhawuleza, izakhono ezifanelekileyo zegrama, kunye nomonde njengoko unokufumana iifayile ezinengxolo eninzi yangasemva kunye neempawu ezahlukeneyo ngexesha nexesha.
Umvuzo ophakathi: $ 45,000 ngonyaka
Le yimisebenzi ephezulu ye-13 engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhle kwaye ndiyathemba ukuba bakuncede ukuba uthathe isigqibo malunga nekhondo lomsebenzi.
I-10 ephezulu yeSayensi kwi-Biology Jobs
Imisebenzi ephezulu engama-24 yoxinzelelo oluphantsi yamaNgeniso ngeNtlawulo elungileyo
Umsebenzi oPhezulu oCothayo oNgcolileyo oPhezulu kuma-20
Imisebenzi ephezulu yokuhlawula eyi-45 eCarlifonia
Imisebenzi emnandi eyi-15 ehlawula kakuhle ngaphandle kwesiGanga
Iinkqubo ze-13 zeMasters eziBalaseleyo eCanada kwimisebenzi
Ishishini kunye nemisebenzi Blog Post
imisebenzi engeyiyo eyomzimba ehlawula kakuhleimisebenzi ekwi-Intanethi ehlawula kakuhlesebenza kwimisebenzi yasekhaya ehlawula kakuhle
Post Previous:Idiploma yasimahla yamabanga aphakamileyo yesikolo kwi-Intanethi ngaphandle kweNdleko yaBantu abaDala
Okulandelayo Post:13 Izikolo eziPhezulu zeZonyango eziFundisa simahla